Blue PUBG Hack 🥇 Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Blue PUBG mbanye anataghị ikike
The PUBG Blue Hack si GamePron nwere usoro ESP, Wallhack, na Aimbot mara mma nke ga-atọ ndị ọrụ anyị niile ụtọ.
Na-aghọ aghụghọ n'ihi na obere oge! Nweta ohere anyị PUBG Blue Hack maka ụbọchị 1
Na-achọ ị nweta mmeri ole na ole ọzọ? Zụta Igodo Ngwaahịa Otu Izu-1 si Gamepron!
Drara onwe gị nye na nka nke hacking na ịzụta a 1-Month Product Key si Gamepron Taa!
Anyị emeela usoro iji ngwaọrụ anyị dị mfe, ihe ị ga - eme bụ ịzụta igodo ngwaahịa nke gị ma ị ga - aga agbụrụ. Chịkwa ndị egwuregwu nwere ọgụgụ isi adịtụbeghị mfe.
Ozi PUBG Blue
PUBG ndị na-anụ ọkụ n'obi nwere ike ị rejoiceụrị ọ rejoiceụ n'ikpeazụ, ebe enwere ngwa PUBG Blue iji tụlee iji aghụghọ gị niile. Ndụ agaghị adị mma ma a bịa n'ọkwa nka gị na PUBG, ọ bụrụ na ị naghị egwuri egwu kemgbe ọtụtụ afọ, nsogbu ị ga - eji merie egwuregwu ga - adịkarị mfe. Enwere ihe kpatara eji ewere ụfọdụ ndị egwuregwu dika “nna ukwu” nke PUBG, na ọ bụ n’ihi na ha na-eji PUBG Blue Hack si Gamepron.
Ọ bụghị naanị na ị na-ere ngwá ọrụ ọ bụla ochie, ebe ọ bụ na nke a bụ ọhụụ ọhụrụ na PUBG Hacks.
A na-etinye atụmatụ ọ bụla ịchọrọ karịa n'ime PUBG Blue Hack. Pụrụ ịdabere na ngwá ọrụ a na-enye ezigbo Iro ESP nhọrọ, nakwa dị ka Loot ESP (na ọbụna Ngwá Agha ESP). I nwekwara ike ịdabere na ngwá ọrụ PUBG Blue maka Radar, No Recoil, Fight Fight, na ndị ọzọ!
Iro ESP (Ọkpụkpụ-igbe, Line)
Ozi Iro (aha, anya, ngwa ọgụ, ahụike)
Loot ESP (Ngwá agha: ngwugwu, anya, ụgbọala, ihe ngosi)
Ebumnuche ntụpọ selector
Banyere PUBG Blue
Hacks na Ndị aghụghọ na-niile kere hà. Enwere ihe kpatara anyị ji enye ọdịiche dị iche iche nke otu mbanye anataghị ikike ebe a na Gamepron, nke ahụ bụ n'ihi na ntụgharị bụ ndụ nke ndụ! Ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ ndị a gụnyere n'ime mbanye anataghị ikike a naanị ga-ezu iji zụta ịzụta, mana ekwela ka anyị gwa gị okwu n'ime ya - lelee nyocha ndị ọrụ wee hụ ihe ha kwuru. Ma ọ bụ omenala Crosshair, Radar, enweghị mgbagha, ma ọ bụ ọbụlagodi Panic Key ọrụ, enwere ọtụtụ atụmatụ ga-enyere gị aka ịme ọfụma dịka ọkpụkpọ PUBG. Bido taa!
Gini mere iji jiri PUBG Blue mee ihe ndi ozo?
Kedu ihe kpatara ị ga-eji tufuo ego gị na ndị na-eweta mbanye anataghị ikike ndị ọzọ? Ọbụlagodi na ha jisiri ike nye otu ọnụọgụ atụmatụ ndị Gamepron na-eme, nsogbu bụ na ha na-akwụ ụgwọ karịa ma ọ bụ na ha nwere ihe ọzọ zoro ezo. You nwere ike ịtụkwasị obi na Gamepron iji nye gị hacks dị ọcha ma nwee nchedo maka egwuregwu niile kachasị amasị gị (gụnyere PUBG), ọ bụ ya mere ndị ọrụ ji aga n'ihu na-arụ ọrụ na anyị maka mkpa hacking ha niile. Edozila obere ka ị na-achọ ịghọ aghụghọ, ebe ọ bụ na a na-enwekarị nhọrọ dị mma karị ebe a na Gamepron!
Mgbe ị chọrọ a dịtụ ọnụ mbanye anataghị ikike nhọrọ na-aga na-enyere gị aka imeri ọzọ, e nweghị ihe ka mma ngwá ọrụ na-etinye okwukwe gị. The na-egwuregwu menu bụ ihe zuru okè ihe atụ nke, dị ka ị na-aga ịhụ otú mfe ọ pụrụ ịbụ iji anyị irè aghụghọ ebe a na Gamepron. Adịghị mkpa ịbụ a kọmputa whiz iji anyị hacks, na ị na-adịghị ọbụna mkpa ka hacked n'oge gara aga!
Na-enyere ihe niile dị ịtụnanya (dịka 2D Radar, Visible Check, no recoil, Ezigbo Ebumnuche, Ọnọdụ ọgụ, wdg) bụ ịpịpụ na nchịkọta egwuregwu anyị, yabụ na ngwaọrụ gị ga-adị njikere mgbe niile.
Q1. Bụ aghụghọ dị mfe iji?
a aghọ aghụghọ ule dị mfe ma dị mfe iji. Gbaa mbanye anataghị ikike> Gbaa egwuregwu ahụ> Hazie ntọala gị> Gwuo.
Ee, ị nwere ike igwu na ihuenyo zuru oke ma ọ bụ ọnọdụ mkpebi ọ bụla ọzọ.
Ogo bụ ihe kachasị anyị mkpa maka ntọhapụ ọ bụla, ọ na-egosi! Anyị raara onwe anyị kpam kpam na mma, nke mere GamePron ka bụ # 1.
Chọpụta kacha mma PUBG hacks niile n'otu ebe! Zụta igodo ngwaahịa taa.
Njikere Na-achị na anyị PUBG Blue Hack?